ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ बाँडफाँट, कस्ले कति पाए ? – Himalaya Television
ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ बाँडफाँट, कस्ले कति पाए ?
२०७७ चैत १३ गते १५:३४
१३ चैत २०७७ काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले आइपिओ बाँडफाँट गरेको छ । बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले आज ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ बाँडफाँट गरेको हो ।
गत फागुन २१ गतेदेखि कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको आइपिओमा १८ लाख ४२ हजार ४८० आवेदकले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये ४४ हजार ६४५ को आवेदन रद्द भएको छ ।
इन्सुरेन्स ज्योति लाइफ बाँडफाँट